HOCD များအတွက် exposure ကုထုံး? (2012) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
HOCD များအတွက် exposure ကုထုံး? (2012)
porn-related HOCD ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကုသမှု protocol ကိုတောင်းဆိုဖြစ်နိုင်သည်
တစ်စုံတစ်ဦးကလိင်တူချစ်သူ-ပေမယ့်ဖြစ်လာသည်သောသူသည် (သူမ) ဖြောင့်ကိုတံဆိပ် HOCD ရရှိခဲ့မျှ-ရှိသည်ဟုသံသယနှင့်အတူနှစ်ပေါင်းခဲ့စွက်ဖက်သောစိုးရိမ်ပူပန်, လိင်တူဆက်ဆံ obsessive-compulsive ရောဂါ။ ပိုများသောစနစ်တကျထိုကဲ့သို့သောစိုးရိမ်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ် obsessive-compulsive ရောဂါ သူတို့မှာလည်းသူတို့ဖြောင့်မှန်လျှင်ရုတ်တရက်တွေးမိတဲ့သူလိင်တူချစ်သူလူဦးဒဏ်ခတ်လို့ပဲ။
HOCD ပြုမူဆက်ဆံသူကိုကုသ, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် စတိဗ် Seay ပါရဂူဘွဲ့မကြာခဏစံ OCD ကုသမှုအကြံပြု: ထိတွေ့မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုကာကွယ်ခြင်း။ Exposure ဆိုသည်မှာအတင်းအကျပ်စေခိုင်းခံရဖွယ်ရှိသည့်အခြေအနေများကိုလိုလိုလားလားဝင်ရောက်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့် - အချို့သောအခြေအနေများတွင်လက်ကိုဖိအားပေးဆေးကြောရန်တွန်းအားကိုတွန်းလှန်ပါ။
သို့သျောလညျးထိတွေ့မှုကုထုံးကိုမကြာခဏနှင့်အတူကူညီပေးသည်သောသိပ္ပံနည်းကျအကြောင်းပြချက် အချို့သော OCD ၏ပုံစံများကြောင့်ညစ်ညမ်း-related HOCD ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ရလဒ်များကိုနိုငျသောအလွန်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
တချို့ကကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ် OCD conceptualize အမူအကျင့်စွဲ၏အရေးကြီးသောဒြပ်စင်ဝေမျှ ယင်းကြောင့် အခန်းကဏ္ဍကြောင်း ဆုလာဘ် ပြဇာတ်။ သူတို့ဆုလာဘ်နှင့်အတူဆက်စပ် neurochemicals ဖြစ်ပေါ်ကြောင့် OCD ဝေဒနာသည်သည်သူ၏အထူးသဖြင့်ထုံးတမ်းဖျော်ဖြေစောင့်ရှောက်။ ကယ်ဆယ်ရေးကောင်းသောခံစားရ၏။
OCD ခံစားနေရသူသည်ဤအာရုံကြောဓာတုဆိုင်ရာဆုလာဘ်ကို (“ တုန့်ပြန်မှုတားဆီးခြင်း”) ကိုတသမတ်တည်းငြင်းပယ်သောအခါသူ၏အစပျိုးစွမ်းအားများတဖြည်းဖြည်းဆုံးရှုံးသွားသည်။ အဘယ်ကြောင့်? သူတို့ဟာအကျိုးကျေးဇူးများခံစားရစေတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ အဘယ်သူမျှမလက်ကိုဆေးကြောကြသည်။ မသက်သာဘူး။ အဘယ်သူမျှမဆုလာဘ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဦး နှောက်က“ Meh …ဒီအာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဆုလာဘ်ကိုငါမရတော့လို့ပဲ။
တူညီသောနိယာမစွဲပြန်လည်နာလန်ထူအတွက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ “ အကျိုးဖြစ်ထွန်းသော” အပြုအမူကိုကြာမြင့်စွာရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့် (ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုတ်ခွာရသည့်အဆင်မပြေမှုတစ်ခုပြီးနောက်) ဦး နှောက်သည်နောက်ဆုံးတွင်သက်ဆိုင်သော ဦး နှောက်ဆားကစ်များကိုတူညီသော venge နှင့်အတူရပ်တန့်လိုက်သည်။ စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုလုံးသည်ကြယ်ကိုယ်နှိုက်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။
အတိုချုပ်, HOCD နှင့်ညစ်ညမ်း-related HOCD အကြားခြားနားချက်သည်:
OCD + လိင်တူဆက်ဆံစိုးရိမ်မှုတွေ (သို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်) = HOCD
တယောက် / လိင်တူချစ်သူ porn = porn-related HOCD မှတင်းမာမှုနှင့် ပတ်သက်. porn အသုံးပြုမှု + ရောက်သောအနှစ်
ထိုကဲ့သို့သောအားနည်းချက်အချိန်လေးမှာရွယ်တူချင်းအားဖြင့်စဉ်းစားမတွေးတောထင်မြင်ချက်များအဖြစ်အသက်တာ၌ကျပန်းဖြစ်ရပ်များ, လူအခြို့လုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ (HOCD) မေးမြန်းစတင်ရန်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
သို့သျောလညျးယနေ့ HOCD အတွက်ထွန်းသစ်စတွန်းအားသည်နာတာရှည် overstimulation ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် ဦး နှောက်ကိုနေ့စဉ်အပျော်အပါးများနှင့်တုံ့ပြန်မှုနည်းစေပြီးအာရုံခံစားမှုအလွန်လိုအပ်သည်။ အမြန်နှုန်းမြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်နာတာရှည်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းကိုလွယ်ကူစေသည်။ အတိတ်၏ erotica နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ဒါလှုံ့ဆော် အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အတွက်ကြောင့်ထုတ်လုပ်ကြောင်း စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ မရပ်မနားလိင်မှုကိစ္စတားဆီးနှောက်ယှက်ခြင်း မှလွဲ၍ ယနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်း (ဝါယာကြိုး) ကိုတိုးပွားစေပြီးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင်အဓိကလှုံ့ဆော်မှုအားလုံးအတွက် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စနစ်ကိုအသက်ဝင်စေသည်။
အားကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုထိုကဲ့သို့သောအံ့သြစရာအဖြစ်, ကြောက်ရွံ့သေ​​ာသဘောသည်, ရွံရှာ, စိုးရိမ်စိတ်,
ဘာမှကြောင်း မျှော်လင့်ချက်များချိုးဖောက်အပါအဝင် အန္တရာယ်.
ထို့အပြင် HOCD ကိုတီထွင်သူများသည်အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်အထူးသဖြင့်ပလပ်စတစ်များဖြစ်သော ဦး နှောက်များရှိနိုင်သည်။ အရ တရုတ်လေ့လာမှု, စွဲလမ်း၏အင်တာနက်ကိုမကျြနှာကိုတိုးမြှင့်စွန့်စားမှုနှင့်ထိတွေ့ရန်ကြိုတင် OCD သဘောထားတွေရှိသူများ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူ၏ ဦး နှောက်သည်ကြီးပွားနိုင်သည် ပုံမှန်အပျြောအပါးမှထုံ ကဖြစ်လာသကဲ့သို့ Hyper-reactive တွေကိုရွေးဖို့။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်သော HOCD သို့ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်သူများမကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသောဘုံတိုးတက်မှုကိုဖော်ပြသည့်ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
၁၇ နှစ် MO (softcore နှင့် imagination သို့) ၂၉ နှစ်နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း ၁၂ နှစ်၊ porn / fetish porn သို့မြင့်တက်လာခြင်း။ ငါအစစ်အမှန်လိင်စိတ်ဝင်စားမှုဆုံးရှုံးလာတယ်။ porn မှတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိလိင်ကနေထက်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ porn န့်အသတ်အမျိုးမျိုးပေးထားပါတယ်။ ငါယခုအချိန်တွင်မြင်ချင်သောအရာကိုရွေးချယ်နိုင်ဘူး။ လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်၏နောက်ကျကျန်ရှိခဲ့သောသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းသည်အလွန်ဆိုးရွားလာသဖြင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်သည်အော်ဂဇင်လုံးဝမရခဲ့ပါ။ အဲဒါကကျွန်မရဲ့လိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့ဆန္ဒကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့တယ်။
desensitization ၏ဤဒီဂရီအတွက်ထားပြီးတာနဲ့စင်မြင့် porn-related HOCD မဘို့ရာခန့်ရှိပါသည်။ porn မျှော်လင့်ချက်များချိုးဖောက် non-ကိုက်ညီအစောပိုင်းက porn အမျိုးအစားများထက်ပို dopamine နဲ့ norepinephrine ဖြန့်ချိခြင်း, နှေးကွေး (စွဲ) ဆုလာဘ် circuitry တက်မီးသောအပိုကန်ပေးခဲ့ပါ။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးကသူမရှိသေးပါအတိတ်ထဲမှာသူ့ကိုနှိုးဆော်ခြင်းသူကိုအမှန်တကယ်လိင်မိတ်ဖက်ဖို့ဆွဲဆောင်မရတယောက် / လိင်တူချစ်သူအရေးယူမှုနှင့်အတူ fetish porn မှပယ်ရနိုင်ဘာဖြစ်လို့မေးခွန်းထုတ်ရန်စတင်နိုင်ပါသည်။
သူ့ဦးနှောက်, သို့သော်, အလိုအလြောကျအမျိုးအစား-in ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်တစ်ဦးဂန္ကိစ္စတွင်လှုံ့ဆော်ဖို့, ဒီဝတ္ထုရန်၎င်း၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုဝါယာကြိုးမှစတင်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးအတွက်ကရှင်းပြသည်အဖြစ် အစောပိုင်းက post ကိုလိင်မှုကိစ္စသည်သေခြင်းအနံ့ကိုပင်ဖြစ်စေနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ယနေ့ porn porn အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏ porn morph အရသာ သူတို့ပြုသမျှအပျြောအပါးတုံ့ပြန်မှုကျဆင်းမှုအဖြစ်နေရာအပေါ်မှာ။
အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူသူလုပ်နိုင်ကွောငျးတှေ့နိုငျသ သာ မိမိအနောက်ဆုံးပေါ် (နှင့်ထို့ကြောင့်အများဆုံးလှုံ့ဆော်) အမျိုးအစားမှအထွတ်အထိပ်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သူသည်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်မကိုက်ညီဟုသူယူဆလျှင်၎င်းသည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်တန်ဖိုးသည် ပို၍ ကြီးသည်။ ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားစေသော၊ သူ၏နှိုးဆွမှုသည်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ပိုမိုမြင့်မားလာသည်။ ယောက်ျားသုံး ဦး သည်သူတို့၏အတွေ့အကြုံကိုဖော်ပြသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးယောက်ျား - ငါလိင်တူချစ်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲနေတယ်လို့အလေးအနက်ထင်ခဲ့တယ်။ ငါ့ရဲ့ HOCD ကအရမ်းအားကောင်းတယ်၊ ငါအနီးဆုံးအထပ်မြင့်ကနေရေငုပ်ဖို့ငါစဉ်းစားနေတယ်။ ငါအရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျတယ်။ ငါမိန်းကလေးတွေကိုငါချစ်တယ်၊ ပြီးတော့အခြားလူတစ်ယောက်ကိုငါမချစ်နိုင်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဘာလို့ ED ရှိခဲ့တာလဲ။ ငါ့ကိုနှိုးဆွခြင်းသို့ရောက်စေရန်ကျွန်ုပ်သည်လိင်၊
ဒုတိယအကောင်လေး: ကြောက်စရာကောင်းတာကငါဟာအမျိုးသမီးတွေကိုအရူးအမူးစွဲလမ်းစေတဲ့ယောက်ျားတွေ၊ ယောက်ျားတွေဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားတွေရဲ့စိတ်ကူးကိုမြင်နေတာပါ။ အထက်တန်းကျောင်းကတည်းကအခြားယောက်ျားများနှင့်သာသီးသန့်ဆက်ဆံခဲ့သောဂေးအမျိုးသားတစ်ယောက်အနေနှင့်၎င်းသည်ထူးဆန်းသည်။ “ ရုပ်ဆိုးသော” အမျိုးသမီးများလမ်းပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရလျှင်ပင်သူတို့နှင့်အတူအရူးအမူးလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်မမြင်နိုင်ပါ။ ဒါရပ်လိုက်မလား? ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါသလား
တတိယကောင်လေး: ပထမ ၂ ရက်မှာကျွန်မဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများစွာနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေချင်နေခဲ့တာ၊ ဒီအတွေးတွေကြောင့်ငါ့ကိုဂေးလို့ထင်စေတယ်၊ ​​ငါဘာလုပ်သလဲ၊ ငါဘာပြောလဲ၊ ကျွန်တော်မစားနိုင်ဘူး ငါဟာကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအတွေးများကိုတွေးမိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူကဲ့သို့ခံစားမိစေရန်၊
အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားခြင်းရှိ၊ မရှိကိုနားလည်ရန်အစဉ်မပြတ်မပြတ်တမ်း“ စမ်းသပ်ခြင်း” နှင့်အခြားစိတ်ချရသောရိုးရာဓလေ့များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အခြားသောညစ်ညမ်းသည့် OCD (ညစ်ညမ်းမှုနှင့်မသက်ဆိုင်သော HOCD အပါအ ၀ င်) ကဲ့သို့စမ်းသပ်မှုနှင့်ရှာဖွေမှုများသည်ယာယီသက်သာရာရစေသည်။ “ စမ်းသပ်မှု” တစ်ခုစီသည်မအောင်မြင်သောနှိုးဆွမှုကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သူတို့သည်ပြtheနာကိုအစပျိုးပေးသည်.
အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့် compulsive အပေါ်ကို run ကိုသတိပြုပါ ဆုလာဘ်။ ကျနော်တို့သူတို့အားဆုလာဘ်မရှိတော့လာမည့်ဖြစ်ကြသည်အဖြစ်စှဲတဖြည်းဖြည်းကြောင့် abstinence မှအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေသည်ဟုစွဲကုထုံးအနေဖြင့်ငါသိ၏။ ဖြည်းဖြည်းချင်း, ဦးနှောက်ဆက်စပ်လမ်းကြောင်းအားနည်းနေခြင်း။
အဆိုပါကုထုံးအကောင်းဆုံးအားဖြင့်ကူညီနိုင်မည်အကြောင်း ဖောက်သည်တစ်ယောက်၏ HOCD ၏နောက်ကွယ်ရှိအကျိုးကျေးဇူးများကိုမှန်ကန်စွာအကဲဖြတ်သည်။ သူ၏လှုံ့ဆော်မှုဆုသည်အဓိကအားဖြင့်“ စမ်းသပ်ခြင်း” မှလည်းကောင်း၊ သူ၏စိတ် ၀ င်စားမှုကိုထပ်ခါတလဲလဲကြေငြာခြင်းမှလည်းကောင်းကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်လျှင် (ယာယီကယ်ဆယ်ရေးရရန်အတွက်) ပြောင်းလဲမှုဖြစ်လျှင်ထိတွေ့မှုနှင့်တုန့်ပြန်မှုကာကွယ်ခြင်း (နောက်ထပ်စမ်းသပ်ခြင်းသို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ် - လှုံ့ဆော်သောကြေငြာခြင်းများ) ကလှည့်ကွက်ကိုလုပ်လိမ့်မည်။
ညစ်ညမ်းသော HOCD ကိစ္စတွင်မူစွဲလမ်းမှု၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်သုံးစွဲသူ၏စိန်ခေါ်မှု၏ခြင်္သေ့ဝေစုပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ရောနှောခြင်းတွင်စွဲလမ်းစေသည့်ဆုနှစ်ခုရှိသည်။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွခြင်း။
ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအကြိုးအသံမပြုစေခြင်းငှါပေမယ့် ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အကျိုးကို circuitry မြှင့်လုပ်ဆောင် အခြို့သောရှေးရှေးအတွက်ဦးနှောက်၏။ roller Coaster နှင့်ထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်စဉ်းစားပါ။ (ကြောင့်နာတာရှည် overstimulation / စွဲလမ်းနေဖြင့်ပေါ်ယူဆောင်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများမှ) အာရုံခံစားမှုအဘို့အပူတပြင်းတစ်ဦးနှောက်စေရန်, ကွောကျမကျသွေးဆောင် activation အဖြစ်အထူးသဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုမှတ်ပုံတင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံး dopamine နဲ့ norepinephrine (adrenaline တစ်ပုံစံ) ထ jacks ။
ဒါပေမယ့်ဒီထက်ပိုပြီးဇီဝဗေဒအဆင့်မှာဆက်လုပ်ရ ဦး မယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုအာရုံကြောဓာတု cortisol မှလည်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုတိုးစေနိုင်သည် dopamine များလွှတ်ပေးရန်ထွက်လာပါတယ်။ နောက်ဆုံးတွင်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုတစ်စုံတစ်ဦးက Hyper-တုံ့ပြန်မှုစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုစေနိုင်ပါတယ်။ သုတေသနအလွဲသုံးစားမှုကြောင့်အစွန်းရောက်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအတည်ပြု နှစ်ခုလုံး ဆက်စပ် (စွဲ) ဦးနှောက်လမ်းကြောင်း၏ခွန်အားတိုးပွားစေ။ သုတေသီများ cortisol အရှင်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍယုံကြည် ဆုလာဘ်-related အပြုအမူရောဂါဗေဒ.
အခြေအနေသည် ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်လူတစ် ဦး ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်စေမှုက BDSM နှင့်ဆင်တူသည်။ HOCD ဝေဒနာသည်များတွင်နိုးကြားမှုနှင့်ထိတ်လန့်မှုသည်လည်းအလားတူအဆုံးသို့ရောက်ရှိသည်။ အဓိကအချက် - ပြင်းထန်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေမှုများရှိနေသော်လည်းမြင့်မားသောနှိုးဆွမှုသည်အပြုအမူအားရပ်တန့်ရန်အလွန်ခက်ခဲစေနိုင်သည် (စွဲလမ်းစေနိုင်သည်) ။
HOCD ဝေဒနာသည်၏ ဦး နှောက်သည်ဆင်းရဲဒုက္ခမှသူ၏အကျိုးကျေးဇူးအချို့ကိုရရှိရန်သင်ယူခဲ့သည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ၊ ဝေဒနာသည်သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်ကြိုးစားသောအခါသူ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာကာလရှည်ကြာစွာတိုးပွားလာလိမ့်မည်။ ဆုတ်ခွာအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည် အားလုံး , စွဲပြန်လည်ထူထောင်အတော်လေးဆိတ်ကွယ်ရာ HOCD စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကနေပိုပြီးဆွဘို့အအစွမ်းထက်မတရားသောပိုဆိုး။
HOCD ဝေဒနာသည်များအတွက်ဤကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည့်စိုးရိမ်စိတ်များကပြင်းထန်သော spikes များ (တိမ်းညွတ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှု) နှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးသော“ စစ်ဆေးခြင်း” တို့ကိုမကြာခဏစွဲလမ်းစေပြန်သည်။ အမှန်မှာအချို့ကသူတို့၏ HOCD ကြောက်ရွံ့မှုသည်အသေးအဖွဲဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည် သူတို့ porn ဖြတ်သည်အထိ။ စွဲနေသည့် ဦး နှောက်သည်အပြင်းထန်ဆုံးသော“ ပြင်ဆင်မှု” ကိုပစ်မှတ်ထားသည်နှင့်အမျှစဉ်းစားနိုင်သည်မှာ - ထိတ်လန့်ခြင်း + စစ်ဆေးခြင်း + HOCD နှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုများကိုလိင်စိတ်နှိုးဆွခြင်း၊ ဖြောင့်သောခံစားချက်များသည်ပျောက်ကွယ်သွားပုံရသည်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲလမ်းစေသောအရာသည်အော်ဂဇင်စ်ကူညီမှု၏စွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်။ လိင်စိတ်နိုးထမှုသည် ဦး နှောက်မှထုတ်လုပ်နိုင်သည့်စွမ်းအားအရှိဆုံးစွမ်းအားဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းဓာတုဗေဒပညာရှင်များသည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်။ ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုတိုးလာသည်နှင့်နေ့စဉ်အပျော်အပါးများကိုတုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းလာသည်နှင့်အမျှလိင်၊ အချို့အသုံးပြုသူများသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာဓာတုဗေဒဓာတ်အားဖြင့်နာရီပေါင်းများစွာကြာအောင်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောမျက်နှာပြင်သို့ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဆိုင်းငံ့ခြင်း (သို့) ရှောင်ရှားခြင်းစသည်တို့ကိုချိတ်ဆက်ထားသည်။
ဦး နှောက်သည်လိင်ဆိုင်ရာနှိုးဆွခြင်းအရင်းအမြစ်သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောမြေသြဇာကောင်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆရန်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ဦး သည်အမြင့်ဆုံး dopamine နှင့် norepinephrine ကိုထုတ်လွှတ်သောအရာတစ်ခုခုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုနှိုးဆွပါက ဦး နှောက်က၎င်းအားအဖိုးတန်သောအရာအဖြစ်အလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်။ သူ၏ပင်ကိုသဘာဝနှင့်မကိုက်ညီသည်ကိုမူအရေးမကြီးပါ၊ အကြောင်းမှာ ဦး နှောက်သည်လတ်ဆတ်မှုကိုတိုင်းတာသောကြောင့်ဖြစ်သည် ဆုလာဘ် circuitry activation ၏အဆင့်ဆင့်အရသိရသည်, orientation ကိုမ။ ပုံမှန်အားဖြင့်အပျော်အပါးကိုပုံမှန်တုံ့ပြန်သော ဦး နှောက်တွင်လူတစ် ဦး ၏တိမ်းညွတ်မှုနှင့်သင့်လျော်သောလှုံ့ဆော်မှုများကိုယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည် စိတ်ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံး ခံစားချက်များကို။ )
မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, ပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအဘို့အ sensitized ဦးနှောက်လမ်းကြောင်းလျော့နည်းလှုံ့ဆော်တွေကို (ပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသူတွေကို) မှကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ကျနော်တို့ဆွေမျိုးလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူအဆုံးစွန်သော unwire, ဒါပေမယ့်ယခင်လို့မရပါဘူး။ တို့ကပြန်ပြောပြအဖြစ်ဤသုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်သရုပ်ပြခဲ့ပြီး ဂျိမ်း G. အ Pfaus et al:
Lalumièreနှင့် Quinsey (1998) ခဲ့တဲ့အတန်အသင့်ဆွဲဆောင်မှု, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဝတ်လစ်စလစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ရုပ်ပုံမှလိင်ကွဲအမျိုးသားများတွင်သိသာထင်ရှားသော conditional လိင်အင်္ဂါ arousal အစီရင်ခံတင်ပြ အလွန်အမင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်နှိုးဆွသောသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ဗွီဒီယိုတစ်ခုနှင့်အတူတွဲ။ (ဗီဒီယိုမပါဘဲ) တစ်ဦးတည်းပုံမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းတစ်ဦးကထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စု [အစား] လေ့ပြသခဲ့သည်။ (အလေးပေးထည့်ပြီး)
အထက်တွင်ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း porn-related HOCD ခံစားနေရသူများအတွက်ကြောက်ရွံ့ခြင်း၏အာရုံကြောဓာတုအကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်မြင့်မားသောကြောင့်လိင်ဆိုင်ရာအထူးသဖြင့်ပြင်းထန်သည်။
porn စွဲပစ္စုပ္ပန်အခါ exposure ကုထုံး backfires
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းသူအတွက် standard HOCD ကုထုံးကို သုံး၍ လိင်တူချစ်သူယောက်ျားများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်လူသားများအတွက်မဟုတ်ဘဲလူသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်မဟုတ်ဘဲ pixel များနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။ အကယ်၍ သူသည်လိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကုထုံးကိုကြိုးစားကြည့်ပါကသူသည်စွဲလမ်းနေသည့်တိကျသောအပြုအမူကိုပြုလုပ်နေသည်။ လူတစ် ဦး သည်သူစွဲနေသည့်အချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့်စွဲလမ်းစေသူကိုမဖြစ်စေနိုင်ပါ!
ထို့ကြောင့် porn-related HOCD ကိုဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးစားသောယောက်ျားများအတွက်ထိတွေ့ခြင်းကုထုံးသည်လုံးဝမှားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သူမအရက်ကိုငြီးငွေ့မည်ဟူသောသီအိုရီကို ပို၍ သောက်သုံးခြင်းနှင့်တူသည်။ တစ် ဦး စွဲ၌, ဆက်လက်အသုံးပြုမှုကိုသာ ဦး နှောက်ထဲမှာစွဲ Ruts ပိုမိုနက်ရှိုင်း။ ထို့ကြောင့် Exposure ကုထုံးသည်ညစ်ညမ်းသော HOCD ဝေဒနာရှင်အားအသုံးဝင်သောအေးစက် (လေ့ကျင့်ခန်းများ) ကိုမြှင့်တင်မည့်အစားအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသောရောထွေးသောမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပေးပို့နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်အဘယ်မှာရှိတဦးတည်းကိုစတင်ရန်သနည်း? porn စွဲအပေါင်းတို့ထက်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်အများအပြားဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးပြန်လာအဖြစ်ကိုလည်းရှုပ်ထွေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုသူတို့ရဲ့အာဏာကိုမဆုံးရှုံးကြောင်းသတိပြုမိ။
HOCD ဖြင့်ညစ်ညမ်းစွဲသူများသည်ဆက်စပ်မှုများကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားခြင်းသည်၎င်းတို့မှရှောင်ကြဉ်မည့်အစားသူတို့၏အမူအကျင့် - စွဲလမ်းမှုအာရုံကြောလမ်းကြောင်းကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ ဤသည်သည်ဖမ်းဆီးရမိခြင်း ၂၂။ စွဲလမ်းသူ (နှင့်သူ၏ကုထုံးပညာရှင်) သည်သူ၏ပြcနာရှိသောပြpersနာများကိုသူ၏ဇွဲရှိရှိအစွမ်းထက်သောတုန့်ပြန်မှုသည် HOCD မဟုတ်ဟုမှားယွင်းစွာကောက်ချက်ချလိမ့်မည်။ သို့သော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုသည်ထူးဆန်းစွာပြောင်းလဲသွားသည်ဟူသောအထောက်အထားဖြစ်သည်။
အဓိကအချက်မှာဆေးစွဲခြင်းသည်ပုံမှန် OCD Exposure & Response Prevention ကုထုံးအတွက်အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောစွဲစွဲလမ်းသူတစ် ဦး ၏အကျိုးကိုမရှာတော့ရင်တောင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း (စမ်းသပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှ) ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်သူ့အားဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်သူ့ကို“ ဆု” ပေးဆဲဖြစ်သည် sensitized စွဲလမ်းကြောင်း.
ဘာ မ ကူညီပါ?
ကျနော်တို့ကုသနေကြသည်မဟုတ်။ သို့သော်ကျနော်တို့ (HOCD မှပြန်လည်ထူထောင် / ခံစားနေရပြီးအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဖော်ပြရန်ဟောင်းကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူတစ်ဦးကိုအရေအတွက်အားဖြင့် Self-အစီရင်ခံစာများကိုဖတ်ရှုကြပါပြီနမူနာ Self-အစီရင်ခံစာ) ။ အသုံး ၀ င်ပါကသူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုကျွန်ုပ်တို့အကျဉ်းချုံးတင်ပြပါမည်။
ယောက်ျားတွေကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အကျိုးကိုတက်ပေးခြင်းကြောင့်သတင်းပို့ နှင့် ယာယီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုမှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကို (စိတ်အေးအေးထားကာချစ်ခင်ကြင်ဖော်ပါသောလိင် မှလွဲ၍) စွန့်လွှတ်ခြင်းသည်သူတို့၏ HOCD ကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီသည်။ သူတို့၏အဓိကဆုလာဘ် (ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှု) ကိုအားဖြည့်ပေးသည်ကိုရပ်တန့်သွားသည်နှင့်အမျှသူတို့၏ ဦး နှောက်သည်အခြားလိင်ဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းရှာဖွေလာသည်။ ဒီဟာလကြာနိုင်ပါတယ် ဒီယောက်ျားတွေရဲ့အတွေ့အကြုံအရ၊ ကုသသူတွေကဖောက်သည်တွေကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီးလအနည်းငယ်ကြာအောင်ထိတွေ့ကုထုံးကိုမစတင်ခင်မှာဖိတ်ကြားချင်လိမ့်မယ်။
စိတ်အေးလက်အေးချစ်ခင်ဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်ပထမတော့ယောက်ျားတွေ, မိတ်ဖက်ဖို့ပုံမှန်အားတုန့်ပြန်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ soothing (က oxytocin ဖြန့်ချိဖြစ်ကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့) ။ အဆိုပါစွဲဆုတ်ခွာ၏အဆိုးဆုံးလွန်ပြီသည်အထိဒါ့အပြင်သူတို့မှာလည်းမကြာခဏပိုပြီးမချိမဆံ့ HOCD spikes ခံစားရသည်။
ပြန်လည်ထူထောင်သူများက HOCD အတွေးများကိုဒုက္ခရောက်စရာမလိုဘဲလက်ခံနိုင်လျှင်အာရုံကြောဓာတုအားဖြည့်မှုကိုရှောင်ရှားနိုင်မည်ဟုဆိုကြသည်။ ထို့အပြင်သူတို့၏လိင်ဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာမရေရာမှုဖြင့်အသက်ရှင်နေထိုင်ရန်နှင့်“ အမှန်တရားကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်” စမ်းသပ်မှုများနှင့်ကြိုးပမ်းမှုများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်သင်ယူခြင်းသည်အကူအညီဖြစ်စေသည်။ ထိုနည်းအားဖြင့်သူတို့သည်ယာယီကယ်ဆယ်ရေးနှင့်“ certainကန်အမှန်” ၏အားဖြည့်အားဖြည့်မှုကိုရပ်တန့်သွားစေသည်။
တစ်နည်းမှာ HOCD ဝေဒနာသည်ရပ်တန့်ရပ်တန့်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် သုံး ကြိုးအလေ့အထများ: အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, ကယ်ဆယ်ရေးရှာခြင်းနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲ။
လူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာ
ဒီလူရဲ့အစီရင်ခံစာဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကညစ်ညမ်းဆုကိုအားနည်းအောင်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်သူဟာကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ကယ်ဆယ်ရေး (စစ်ဆေးခြင်း) အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမကိုင်တွယ်ခဲ့ဘူးဆိုတာစတင်ခဲ့တာကြောင့်ပါ။
အခုဆိုရင်ငါဟာသုံးလကျော်ကြာတဲ့အထိညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲ HOCD message boards တွေကိုစစ်ဆေးနေတဲ့ stupor ထဲကိုဝင်သွားတယ်။ ကျွန်တော်သည်ထိုဆိုဒ်များကိုနေ့စဉ်နာရီပေါင်းများစွာတစ်ခါတစ်ရံတစ်နာရီအကြိမ်များစွာစစ်ဆေးခဲ့သည်။ အလုပ်တွင်၊ ကားမောင်းနေစဉ်၊ ညအိပ်ရာဝင်ချိန်နှင့်စသည်တို့စသည်ဖြင့်တစ်ခါတစ်ရံတစ်ကြိမ်ကြိမ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာစစ်ဆေးခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ 'အပြုအမူကိုစစ်ဆေးခြင်း' ဆိုးသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ချစေသည့်အရာတစ်ခုခုကိုဖတ်သည့်အခါကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအရာတစ်ခုခုကိုဖတ်သည့်အခါမီးခိုးထွက်ပြီးမထင်မှတ်လောက်အောင်ဖြစ်လာသည်။
ငါသည်လည်းလိင်တူချစ်သူနှင့် bisexual board များအပါအဝင်အခြား message board များသို့လည်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ဤသည်ပဲလိမ်ကြီးထွား။ ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်မှုများအားလုံးကြောင့်အိပ်မပျော်ဘဲကျွန်ုပ်ဘဝတွင်အမှန်တကယ်မရှိခဲ့ပါ။ ငါကဒီပျဉ်ပြားပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်ငါသူတို့အပေါ်မှာဖတ်ပါသောအရာကိုစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်စေ။ စဉ်ဆက်မပြတ်။ ကျွန်တော့်ဆွေမျိုးတွေကဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားခဲ့ရတယ်။ တစ်ခါတလေညအချိန်မှာတစ်ယောက်တည်းငါဟာအင်တာနက်မက်ဆေ့ခ်ျဘုတ်တွေပေါ်မှာ HOCD စစ်ဆေးခြင်းကို ၂-၃ နာရီကြာအောင်လုပ်ပြီး၊
ငါရပ်လိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ငါ့အိမ်ထောင်ဖက်ကလုံးဝစိတ်ပျံ့လွင့်စရာမရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုရထိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်က ၁၅ မိနစ်ကြာတဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုပဲရှိခဲ့တယ်၊ ပြန်ကြားချက်တွေကိုစစ်ဆေးတယ်။ သွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ရလဒ်ကတော့ငါအရမ်းသက်သာသွားတယ်။
ဒါဟာတကယ်ကိုတော်တော်ကိုထူးခြားပါတယ် ကျွန်ုပ်၏ HOCD သည်သိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည် ဦး နှောက်အား“ ဤအတွေးများသည်အရေးကြီးသည်” ဟု ဦး နှောက်သို့အမြဲတမ်းအချက်ပြခြင်းမပြုဘဲစစ်ဆေးခြင်း၊ လတွေအတွင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုကျွန်တော်မဖတ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ပျဉ်ပြားတွေကိုစွန့်လွှတ်ပြီးကတည်းကငါဟာဒုတိယစာအုပ်ကိုရောက်နေတယ်။ ညအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏အားလပ်ချိန်များသည်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်အတူသော်လည်းကောင်း၊ မီးဖို၌လည်းကောင်းဖတ်ရှုခြင်းခံရသည်။ ငါအများကြီးပိုကောင်းအိပ်ပျော်နေသော။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါဆွဲဆောင်မှုကောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါငါထပ်ခါတလဲလဲတိုးတက်လာတယ်။ ပြီးတော့သူကသူ့အကြံအစည်နှင့်အတူစစ်ဆေးနေမှ။ ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာအများကြီးနည်းသွားပြီးအတွေးကပိုမြန်သွားတယ်။
ယခုတွင်ငါသည်ငါ၏အ HOCD ကြောင့်ငါနောက်ဆုံးတော့နှစ်နှင့်ထိုသို့နှစ်ကြာ PMO အပေါ် overdosed အခါ, ငါကိုမှန်ကန်အမျိုးသမီးတွေကိုငါ့ဆွဲဆောင်မှုများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အချက်ကိုမှပါပြီစေခြင်းငှါထင်ပါတယ်။ ကသာမရှိရင်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများငါ့ထံသို့အတူတူကြည့်ဖို့စတင်ခဲ့နှင့် Bam လိင်တူချစ်သူဖြစ်ပွားခဲ့ခံအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်။
ထိတွေ့မှုကိုထောက်ခံခြင်းမရှိသော OCD ကုသမှုအတွက်လက်ရှိကုထုံးစနစ်ရှိသည်။ စိတ်ရောဂါအထူးကု Jeffrey Schwartz က၎င်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ (ဖော်ပြချက် Read Doidge ရဲ့ထံမှယူ ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်.)
Schwartz ကသူ့လူနာတွေကိုသွန်သင် ဘယ်လို neuroplasticity အကျင့်ကိုကျင့် ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့မလှူရခြင်းဟာမလိုလားအပ်တဲ့၊ အလွန်အမင်းတက်ကြွတဲ့ ဦး နှောက်ကွင်းဆက် (စွဲလမ်းမှုနှင့်မတူဘဲ) မှထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့နားလည်ပါတယ် ထို့နောက်သူသည် ဦး နှောက်၏ဝါယာကြိုးကိုသတိရှိရှိဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟုရှင်းပြခဲ့သည်။
အချို့နည်းလမ်းများတွင်၎င်းသည်ထိတွေ့ခြင်းကုထုံးနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ထိတွေ့မှုမှတစ်ဆင့်လေ့ကျင့်ရန်ကြိုးစားမည့်အစားတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်စပ်သောအချက်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဂီယာများကိုရွေ့လျားခြင်းဖြင့် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ကြိုးစားသည်။ Schwartz သည်ကြိုတင်ရွေးချယ်ထားသည့်အပြုသဘောဆောင်သောလှုပ်ရှားမှုသို့ကူးပြောင်းရန်အကြံပြုသည်။
ရည်မှန်းချက်မှာကယ်ဆယ်ရေးရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်အဆင်မပြေမှုကိုရှောင်ရှားရန်မဟုတ်ဘဲပြtheနာများအစားဆက်စပ်မှုမရှိသော ဦး နှောက်လမ်းကြောင်းများကိုဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ဦး နှောက်သည်ယခင်“ ဆုလာဘ်များ” မှပြတ်တောက်သွားပြီးစိုးရိမ်ဖွယ်ရာအားအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။
တစ်ခုဘေးဖယ်, HOCD ကျွမ်းကျင်သူ Fred သည် Penzel လည်းစိတ်ပျက်အားလျော့အဖြစ် porn စွဲဘို့ထိတွေ့မှုကုထုံးသူသည် HOCD ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများတွင် Exposure & Response Prevention ကုထုံးအားအကြံပြုခဲ့သည်ဆိုသော်လည်း
မျှော်လင့်သုတေသီများမကြာမီ protocols များခံစားနေရသူ HOCD ရာများအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ရသောဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ ထိခိုက်ခံရသူအများအပြားဟာသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြေရှင်းရန်အပူတပြင်းဖြစ်ကြသည်။ အမှန်စင်စစ်သွားရောက်ကြည့်ရှုသူအပေါင်းတို့ပြန်လည်ထူထောင် porn စွဲ၏ ကျွန်ုပ်တို့၏ siteအဆိုပါ HOCD ယောက်ျားတွေအဆိုးဆုံးခံရနဲ့အလွယ်ကူဆုံးပြန်သွားကြသည်။
ပစ္စုပ္ပန်မှာများစွာသောသူတို့မဟုတ်သိကြသည့်အခါကောင်းစွာအဓိပ္ပာယ်ကုသသူတို့လိင်တူချစ်သူ (သို့မဟုတ်ဖြောင့်) တွေဟာသူတို့ကိုပြောပြလိမ့်မည်ကိုကြောက်ရွံ့အကူအညီနဲ့ရှာချီတုံချတုံဖြစ်တယ်။
Porn နှင့်ဆက်စပ်သော HOCD ဝေဒနာသည်များသည်ပုံမှန်ကုထုံးသည်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သို့ပြန်လည်လည်ပတ်ရမည်ကိုမသိကြပါ။ ကွာ ကယ်ဆယ်ရေးမှ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှ၊ အချိန်ကာလတစ်ခုအထိလိင်စိတ်နိုးထမှုမှ) ။ အများစုမှာအသိပေးအကြောင်းကြားထားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီမပါဘဲရှာဖွေမည်မဟုတ် တိုးတက်မှုရရန်သူတို့သည်စွဲလမ်းမှုနှင့် ဦး နှောက်ကိုမလိုလားအပ်သောဆုလာဘ်များမှဖယ်ထုတ်ခြင်းတွင်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၏အခန်းကဏ္inကိုကောင်းစွာတတ်ကျွမ်းသည့်ကုထုံးဆရာတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
ပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှစွဲလမ်းနှင့်တင်းမာမှုလက္ခဏာတွေ? လေ့လာမှု ၃၀ ကျော်သည်တွေ့ရှိချက်များကိုညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံမှု)၊ ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်
လိုအပ်လျှင် Clear ကိုစွဲပထမဦးဆုံး, ထို့နောက်ထိတွေ့မှုကုထုံးကိုရှာခြင်း
ကျွန်မအဖြေကိုရှာဖွေနေလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကအကြောင်းကိုဒီ site များနှင့် YBOP သို့ရောက်ကြ၏။ PMO ငါပြောချင် 13 နှစ်ပေါင်းနှစ်ပေါင်းများစွာနေ့စဉ်ရိုးရာဓလေ့ခဲ့သညျ။ ငါကဒီဖိုရမ်၌သငျ၏မေလကဲ့သို့ညစ်ညမ်း၏ပုံမှန်အမျိုးအစားများမှ de-sensitized ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဝတ္ထုသို့မဟုတ်တုန်လှုပ်ဖွယ်ပစ္စည်းရှာဖွေနေတဲ့သတိအဆင့်ကိုပေါ် သိ. ငါ့ကိုမပါဘဲတကယ်စံဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါအိပ်ခန်းထဲမှာယုံကြည်မှုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်စသည်တို့ကို, ငါသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့ ED ခံစားခဲ့ရ, စစ်မှန်သောဘဝတှငျအမြိုးသမီးနဲ့အကြီးအလိင်ဘဝခဲ့အဖြေတွေကိုများအတွက်ဆီးရောဂါပါရဂူ သွား. ငယ်အပြာရောင်ဆေးပြားတယ်ဘယ်တော့မှမ။ အစဉ်မပြတ်ငါအမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်ချွတ်ရမယ့် porn မြင်ကွင်းတစ်ခုငါ၏ဦးခေါင်း၌ပုံရိပ်တစ်ခု conjure ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်။ ထိုအခါ HOCD ပြဿနာရောက်လာတယ်။
ငါ၏အဇာတ်လမ်းထဲမှာခြားနားချက်ငါတကယ် porn ၏လိင်တူချစ်သူ / transexual ဤလောကသို့စွန့်ဘယ်တော့မှပေမယ့်ကျွန်မရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာငါအော်ဂဇင်ရှိသည်ဖို့သူစိမ်းနှင့်ပိုပြီးတုန်လှုပ်ဖွယ်အတွေးများကိုလိုအပ်နေခဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်ခဲ့ကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ အဆိုပါ HOCD ငါအားလပ်ရက်အပေါ်နေစဉ်တွင်ကန်။ ငါ masturbating စဉ်တွင်, ပုံမှန်အတိုင်းအတှေးအလုပ်မလုပ်ခဲ့ကြပြီးနောက်လိုက်တယ်, တစ်ပိုင်းလိင်တူချစ်သူအတွေးငါ့ဦးခေါင်းသည်ခုနှစ်နတေုနျးရုတျတရကျနှင့်ဤအားနည်းအော်ဂဇင်ရှိခြင်းတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ငါကအားလုံး၏ထိတ်လန့်သည့်တရားခံခဲ့မယ်ဆိုရင်သေချာမဖြစ်ကြောင်းကိုပေမယ့်ငါကငါ့ကိုထဲကငရဲကြောက်လန်သောသင်ကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာငါမဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအဘို့စဉ်းစားခဲ့ကွောငျးဘာမှဘယ်တော့မှခဲ့, ငါအချိန်တွင် 33 ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါကလူယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အားငါ့အတုံ့ပြန်မှုများအားလုံးကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာအဆိုပါအားလပ်ရက်၏တပြင်လုံးကိုငြိမ်ဝပ်စွာနေနေခဲ့ရသည်။ ငါသည်ငါ့ groinal အာရုံနဲ့တူခံစားခဲ့ရနှင့် check လုပ်ထားနှင့် check လုပ်ထားနှင့် check လုပ်ထားသောအရာကိုစွဲလမ်း။ ငါလိင်တူချစ်သူလှည့်ခဲ့နှငျ့အမြိုးသမီးနဲ့ငါ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမှာအကောင်းဆုံးရောနှောခဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုပို HOCD လောင်စာရှိမရှိကျော်စွဲလမ်း။ ငါပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီကိုရှာမယ်လို့အထိဤစွဲလမ်းကောင်းတစ်ခုနှစ်လများအတွက်ကြာခဲ့သည်။
နည်းနည်းပြန်လေ့လာရန်အတွက် HOCD နှင့်ပတ်သက်သည့် google ရှာဖွေမှုအားလုံးနှင့် YBOP ကိုရှာပြီး“ သင်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတူလိင်တူချစ်သူဟုတ်မဟုတ်မည်သို့သိနိုင်သနည်း” နှင့်ပတ်သက်သောဆိုဒ်များ YBOP မှအကြောင်းအရာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးအလွန်ဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါဖိုရမ်များမှလူအများစုကသူတို့၏ HOCD သည် PMO မရှိဘဲပျောက်ကင်းသွားသည်ဟုဆိုကြသည်။ ငါကသင်တန်းကြိုးစားခဲ့ BTW- ငါဟာဆက်ဆံရေးရှိတုန်းပဲ။ ဒီအချိန်အတွင်းမှာတော့ငါလိင်ဆက်ဆံမယ်၊ ဒါပေမယ့် PMO မရှိဘူး။ ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့အရာကကျွန်တော့် ED ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာပါပဲ။ လိင်သည်ကျွန်ုပ်စိတ်တွင်ပုံရိပ်များမဟုတ်တော့ဘဲကျွန်ုပ်ရှေ့တွင်ရှိသောသူနှင့်အတူတူပြုမူခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် HOCD သည်ကျွန်ုပ်အတွက်မဝေးခဲ့ပါ။ အဆိုပါမေးခွန်းအစဉ်အဆက်သကဲ့သို့မကောင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်၏ကုသမှုအကြောင်းပြောဆိုလိုသောကြောင့်၎င်းသည်ရိုးရာ HOCD နှင့် porn နှင့်ဆက်စပ်သော HOCD နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အကဲဖြတ်မှုအပေါ် မူတည်၍ သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်သင့်ကိုထားခဲ့မည်။ ငါ OCD အပေါ်ကျွမ်းကျင်သူသူတစ် ဦး ကုထုံး, တကယ်တော့တစ် ဦး ကိစ္စအဖြစ်သူ၏ဆောင်းပါးများကိုအနည်းငယ် YBOP အပေါ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့နေကြသည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူကငါနှင့်အတူတုံ့ပြန်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ထိတွေ့ကုထုံးသို့စွန့်။ သင်မသိသောသူများအတွက်ဤကုထုံးသည်လူကိုလူနာအားတဖြည်းဖြည်းချင်းကြောက်လန့်နေသောအရာများနှင့်ဖော်ထုတ်ခြင်းပါဝင်သည်။ သင်အနည်းငယ်ကြောက်လန့်စေသောအရာများဖြင့်စတင်ခြင်းသည်သင်ကိုအမှန်တကယ်ကြောက်လန့်စေသောအရာများဖြင့်အဆုံးသတ်သည်။ ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကသင်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားချင်တယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုပိုပြီးစဉ်းစားပါ။ အနုတ်လက္ခဏာအတွေးများကိုတွန်းလှန်ခြင်းသည်သင့်အား၎င်းတို့ကိုပြန်လည်သတိပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အတှေးအချေါမြားကိုသဘောတူပွီးသူတို့ကိုဖျောပွခွငျးအားဖွငျ့သူတို့ကိုသငျမပွောငျးလဲတော့ပါ။ ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အတွက်ကြောက်စရာရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ဖို့နှင့်ညီမျှသည်။ ပထမတော့သင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက် ၁၀ ကြိမ်မြင်ရရင်၊ ဒီတော့ကြောက်စရာမကောင်းတော့ဘူး။ ငါ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့်အရာများကိုစာရင်းပြုစုခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ တစ်ဆယ်မှဆယ်ခုအထိအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်၊ ဇာတ်လမ်းတွေကိုဖတ်ရှုခြင်း၊ လိင်တူချစ်သူလို့ယူဆရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူဖြစ်မယ်လို့အကြံပြုတဲ့အသံဖမ်းခြင်းများကိုစတင်ခြင်းအားဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ဆေးကုသမှုခံယူနေစဉ်ငါလိင်တူချစ်သူဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောအတွေးနှင့်သဘောတူခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသောအဆိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတော့ပစ္စည်းကကျွန်တော့်နံပါတ် ၁၀ အထိတိုးလာတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာငါဟာပိုကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ BTW- ကျွန်ုပ်၏နံပါတ် ၁၀ သည်လိင်တူချင်းဆန်သောလိင်စိတ်နိုးထသူများအားစောင့်ကြည့်နေခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ခံစားမိမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏တုန့်ပြန်မှုများကို“ စစ်ဆေး” ရန်ကျွန်ုပ်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ငါထိတ်လန့်စရာအကြောင်းအရာနှင့်အတူ "ဖြစ်" ရုံ, ငါဘာမျှမဖြစ်လာကြောင်းသဘောပေါက်သည်အထိကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်ခွင့်ပြုခဲ့ရတယ်။ အိမ်စာလုပ်လေလေ၊ ပစ္စည်းကနည်းလေလေပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ငါပြောတာက“ ဟုတ်တယ်၊ ငါကလိင်တူချစ်သူဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူ့ကိုဂရုစိုက်တယ်” လို့ပြောနိုင်တယ် အဆုံး၌သင်တွေ့သည်၊ ၎င်းသည်မေးခွန်းနှင့်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုအရူးဖြစ်စေသည့်တိကျသောအဖြေကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ငါတကယ်လိင်တူချစ်သူလား ငါမစဉ်းစားဘူးဒါပေမယ့်ငါကနောက်တဖန်ကျော် obsessive ဘူး။ ငါအရမ်းတော့ဘူး။ ငါအခါအားလျော်စွာကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအတွေးများကိုရဆဲဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့နှင့်ကျွန်ုပ်သဘောတူပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲစေပါသည်။ မေးခွန်းများသည်ကျွန်ုပ်ခေါင်းထဲကျပန်းဖြစ်သွားနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အပေါ်၌သက်ရောက်မှုမရှိတော့ပါ။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှမေးခွန်းများသည်ပြိုလဲသွားသည်။
အားလုံးအားလုံးအတွက်, ငါ porn ဖြတ်ဒီလိုမျိုးမဆိုကုထုံးမစတင်မီသော့ချက်ကြောင်းသဘောတူကြဘူး။ porn ဒီရှုပ်ထွေးထဲသို့ငါ့ကိုတယ်ဒါပေမယ့်ကုထုံးကြောင့်များထဲကငါ့ကိုတယ်။ သငျသညျလိင်တူချစ်သူ porn သို့မဟုတ် transexual porn ၏ဤလောကသို့ခရီးထွက်ခဲ့သူအသုံးပြုသူတစ်ဦးလျှင်ဒီကုထုံးအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကကျွန်မမသိရပါဘူး။ ကျွန်မပထမဦးဆုံးအဖြတ်နှငျ့သငျလအနည်းငယ်အကြာတွင် HOCD နှင့်အတူရပ်ဘယ်မှာကြည့်ဖို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်သို့ငါသည်လည်းငါ၏အကုထုံးကနေလေ့လာသင်ယူဖြောင့် porn စောင့်ကြည့်သူတို့ကဖြောင့်ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဤပြဿနာကိုနှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းတွေကိုသွားနိုင်သူအများအပြားလိင်တူချစ်သူလူတွေရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ ငါသည်ငါ့ခရီးတစ်ဦးချင်းစီကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကုထုံးငါ့အဘို့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဘဝဖြစ်ခဲ့သည်။ သငျသညျအကူညီရှာတွေ့ပြုလျှင်, ဒီမဟုတ်ဘဲယေဘုယျအကြံပေးဆက်ဆံခဲ့သူတစ်ဦး OCD အထူးကုကိုသွားပါ။ သူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလျှင်, သူတို့ကသင့်ရဲ့ orientation ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူပြောပြသော်လည်း, သငျသညျမေးခွန်းများကိုကျော် obsessing ရပ်တန့်ဖို့မကူညီကြလိမ့်မည်, လာမည့်ရှိကြလော့။ ငါသညျဤအခြို့သောငါ၏အဇာတ်လမ်းကိုဆက်စပ်နှင့်သင်ဘဝနှင့်အတူပြန်လမ်းကြောင်းအပေါ်အရကူညီပေးနိုင်ပါသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါ OCD ရှိသည်, ငါစာအုပ်ဖတ်နေခဲ့သည် ဦးနှောက် Lock ကို, ငါထွက်ရှာတွေ့
ဦးနှောက်အတွင်းပိုင်းနက်ရှိုင်းတဲ့ဝါကျဖွဲ့စည်းပုံ caudate နျူကလိယကိုခေါ်တည်ရှိသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဤဖွဲ့စည်းပုံကိုလေ့လာခြင်းနှင့်ယုံကြည်ကြသည်ကြပါပြီ, OCD နှင့်အတူလူထဲမှာ, caudate နျူကလိယချွတ်ယွင်းနေစေခြင်းငှါ။ ဖြစ်ကောင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်, စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်နားလည်မှုအတွက်အသုံးပြုတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ဦးနှောက်၏ရှေ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အလွန်ရှုပ်ထွေးမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုအပြောင်းအလဲနဲ့စင်တာသို့မဟုတ် filtering ကိုဘူတာရုံအဖြစ် caudate နျူကလိယ၏စဉ်းစားပါ။ အတူတူလာမယ့်သူကမှတည်ရှိသည်ဖြစ်သော၎င်း၏အစ်မဖွဲ့စည်းပုံသည် putamen, တစ်ဦးကားထဲတွင်တစ်ခုအော်တိုဂီယာကဲ့သို့ caudate နျူကလိယလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတူ။ အဆိုပါ caudate နျူကလိယနှင့်အတူတကွ striatum ဟုခေါ်ကြသည်သော putamen, ဦးနှောက်-သူတို့အားခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှု, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုနှင့်သူတို့အားလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ခံစားချက်များကိုပါဝင်သောစဉ်းစားတွေးခေါ်နှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးထိန်းချုပ်အလွန်ရှုပ်ထွေးအစိတ်အပိုင်းများကနေမက်ဆေ့ခ်ျအတွက်ယူပါ။ သူတို့ကတဦးတည်းအပြုအမူမှအခြားဖို့ချောချောမွေ့မွေ့အကူးအပြောင်းအာမခံတစ်ခုအော်တိုဂီယာနဲ့တူသံပြိုင်အတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု။
ငါထို့နောက် caudate နျူကလိယ porn ကြောင့်ထိခိုက်သည်နှင့်ငါတွေ့ကိုဘယ်လိုထင်
သူတို့ကနာရီကြောင်းပိုမိုမြင့်မားအရေအတွက်အားတွေ့ရှိရ လက်ျာ caudate နျူကလိယကိုခေါ်ဦးနှောက်၏ဧရိယာထဲမှာမီးခိုးရောင်အမှု၌လျှော့ချဆက်နွယ်နေကြောင်းကြည့်ရှု porn။ ဤသည်အသင်းအဖွဲ့အင်တာနက်စွဲခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့်အတူတစ်စက္ကန့်ဆက်စပ်မှုဖျက်သိမ်းရေးပြီးနောက်ကျန်ရစ်၏။ တစ်ခုကအသင်းအဖွဲ့လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ဤဦးနှောက်ဧရိယာထဲမှာလျော့နည်းမီးခိုးရောင်ကိစ္စကျော်ပိုမိုမြင့်မား porn စားသုံးမှုအကြားရှာတွေ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါသုတေသီများရေရှည်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုများကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်ဤအနက်။
ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းရှောင်, OCD နှင့်အတူလူတို့နှင့်အတူကူညီလိမ့်မည်။
PS: နှစ်ခုအကြား link ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်, ငါသိပ္ပံပညာရှင်များကဲ့သို့ခံစားကြရသည်။ 😛
ငါသည်ဤဆွေးနွေးမှုတချို့ပျော့ပြောင်း add ချင်တယ်။ ထိတွေ့မှုကုထုံး HOCD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အလွန်ထိရောက်သောဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုထောင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ကြောင်းသိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲနေဖြင့်ဆက်စပ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအတှေးနေသော obsessive ရှိခြင်း၏စံနှုန်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်သူတွေကိုဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်လိင်တူချစ်သူနှင့်သူ / သူမ၏လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့နှင့်အတူမျှသာမသက်မသာသူသည်တစ်စုံတစ်ဦးကမပါဝင်ပါဘူး။ OCD နှင့်အတူတစ်ယောက်ယောက်ကိုတခုရဲ့ဥပမာသည်အခြားအဝတ်အချည်းစည်းယောက်ျားစဉ်းစားသူ့ကိုလိင်တူချစ်သူဖြစ်လာစေလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးကိုကွောကျရှံ့ရှိပါတယ်သောသူဖြစ်သည်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောတစ်စုံတစ်ဦးကိုအမှန်တကယ်လူတစ်ဦးထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသတ်ဖြတ်ရန်ဦးတည်သွားစေပါလိမ့်မယ်နာကျင်စဉ်းစားကဲ့သို့သောအခြားပုံမှန် OCD obsessive, ဆင်တူသည်။ HOCD ခုနှစ်, ဝတ်လစ်စလစ်လိင်တူချင်းပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုမှသာလေ့ဖြစ်ပေါ်သည်အထိအဓိကဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများသောအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေနှင့်အတူနှစ်သိမ့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲခံရခြင်းနှင့်အတူကုသမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။